Wednesday October 31, 2018 - 12:15:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 25 qof oo ay kamid yihiin mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan ayaa dhintay kadib markii dhulka lasoo dhigay diyaarad ay la socdeen mas'uuliyiinta gobolka Farah ee dhaca galbeedka Afghanistan.
Wararka ka imaanaya Afghanistan ayaa xaqiijinaya in guddoomiyihii gobolka Farah iyo ku xigeenkiisi ay dhinteen kadib markii ay Taliban soo ridday diyaarad nuuceedu yahay helicopter.
Naasir Mahar oo ah afhayeenka maamulka gobolka Farah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dadka diyaaradda soo dhacday ku dhintay ay ka mid yihiin guddoomiyihii gobolka iyo taliye ku xigeenkii ciidamada dowladda ee Galbeedka Afghanistan.
Diyaaradda oo ka duushay gobolla Farah ayaa kusii jeedday gobolka Hiraat ee dariska la ah, isku geyn dhimashadu waa 25 qof oo dhammaantood ah mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada islaamiga Taliban ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerarka, Taliban waxay sheegtay in ciidamada qaabilsan difaaca cirka ay dhulka soo dhigeen diyaaradda.
Bishii lasoo dhaafay weerar ka dhacay gobolka Qandahaar ayaa lagu dilay guddoomiye gobolka iyo Jeneraal ruug caddaa ahaa oo wadashaqeyn dhow lalahaa isbaheysiga NATO waxaa sidoo kale weerarkaa lagu dhaawacay kormeeraha guud ee ciidamada Mareykanka waxaana si dirqi ah ku badbaaday taliayaha isbaheysiga NATO.